Tokony ho ilaina amin'ny kitapo kosmetika rehetra ny vehivavy
Raha nisy vokany ratsy teo amin'ny masonao ny adin-tsaina isan'andro sy ny fanahiana dia aza manahy. Noho ireo fonosana fikolokoloana mason-tsivana mahafinaritra anao, azonao atao ny mamerina amin'ny laoniny ny famirapiratan'ny masonao sy ny hatsarany.
Avelao hamirapiratra indray ny masonao
Amin'ny fampiasana tsy tapaka an'io endri-tsoratry ny sarontava masom-bolo tena tsara io, ny masonao dia afaka miseho mamiratra kokoa noho ny hatramin'izay. Ny pads dia manana anti-antitra sy ketrona mampihena fananana ary afaka manampy mandanjalanja eo ambanin'ny aloky ny maso sy ny hoditra tsy mitovy loko.
Formula mahery vaika miaraka amin'ireo akora tsara indrindra voajanahary
Omeo hydration mahery sy fikarakarana tena tsara ny masonao, misaotra ny paikadin'ny pads anay, izay ampanan-karena otrikaina E, dite Green & Fruits Tropical.
Ny masom-bolo tsy misy tenona hydrogel dia ny masom-borona mahazatra indrindra eny an-tsena afa-tsy ireo hydrogel lakaoly legioma. Ampiasaina amin'ny fametahana volomaso sandoka sy fanesorana ny ketrona amin'ny maso izany. Amin'izao fotoana izao, ny vokatra vokarinay dia feno. Eto aho dia hifantoka amin'ny patch anti-ketrona ho an'ny maso. Ny firafitr'ity patch ity dia misy lamba spunlace sy fonosana hydrogel. Anisan'izany, ny akora mavitrika (ao anatin'izany ny fitrandrahana raokandro sinoa) dia azo ampidirina amin'ny hydrogel, na tsy azo ampiana essences, satria ny hydrogel mihitsy dia misy fangaro mando toy ny glycerin, saingy ratsy kokoa ny vokany raha kely kokoa.
Mandritra izany fotoana izany dia azo ampiasaina miaraka amin'ny microneedles ity patsa-maso ity, miankina amin'ny vokatry ny hydrogel amin'ny famoahana miadana mba hanome akora mahomby ho an'ny microneedles.
Raha tianao ny vokatray dia tongasoa izahay manontany.
Teo aloha: Sarontava maso mangatsiaka tsy voatenona
Manaraka: Fehin-tongotra tsy tenona